वैज्ञानिकबिनाका अनुसन्धान केन्द्र- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
वैज्ञानिकबिनाका अनुसन्धान केन्द्र
‘एक घण्टाको दूरीमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र छ तर स्याउमा लागेको रोगकिराबारे कुनै चासो नै दिँदैन’
वैशाख २९, २०७९ डीबी बुढा
जुम्ला — रडिखल्लामा स्याउको बगान छ । धेरैजसो बोट स्थानीय जातका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ–२ स्थित बगैंचा रामकृष्ण बुढ्थापाको हो । ३ सय ५० बोट छन् । आधाभन्दा बढी बोट फुजी जातका छन् । पुरानो जातको स्याउमा बोक्रा खुइलिने रोग, लाही र गोब्रे किराले संक्रमण गरिरहेको छ ।
स्याउसँगै मौरीपालन, पशुपालन र जडीबुटी खेती पनि उनले बगैंचा आसपासको खाली जग्गामा व्यावसायिक रूपमा गरेका छन् । उनले वार्षिक तीन टनसम्म स्याउ फलाउँथे । बगैंचामै ५० रुपैयाँ केजीमा स्याउ व्यापारीलाई दिन्थे । प्रतिबोटमा ४० केजी राम्रो स्याउ फल्थ्यो । जडीबुटी खेतीबाहेक सबैमा रोग लागेको छ । तीन वर्षदेखि स्याउ राम्रो फलेको छैन । किन फलिरहेको छैन, रोगकिरा कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन कुनै अनुसन्धान केन्द्रका प्रतिनिधि उनको बगैंचामा पुगेको छैन । २०५४ देखि स्याउ खेती थालेका बुढ्थापा जुम्लाका अगुवा किसान हुन् । ‘एक घण्टाको दूरीमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र छ तर स्याउमा लागेको रोगकिराबारे कुनै चासो नै दिँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले किसानको समस्याको अनुसन्धान गरेको छैन । यहाँको अनुसन्धान किसानको हितका लागि होइन जस्तो लाग्छ ।’
जुम्लामा हुने फलफूलका प्रजाति, अवस्था, रोगकिराको संक्रमण रोकथामका उपाय बताउन सरकारी निकाय उदासीन देखिएको गुनासो किसानको छ । मौरीमा पाँच वर्षयता रोगकिरा लागेको छ । मौरी मरिरहेको छ, मह उत्पादन घटिरहेको छ । रोग पहिचान हुन सकेको छैन । किसानको सक्रियतामा मौरी विकास महाशाखाबाट विज्ञ बोलाएर देखाइयो । तर, रोग पत्ता लाग्न सकेन । मौरी विकास महाशाखाका विज्ञले रासायनिक विषादी ब्युटाकोलरको प्रयोगले मौरी मर्न थालेको निष्कर्ष निकाले । तर किसानहरू यस्तो निष्कर्षमा पूर्ण सहमत छैनन् । यो निष्कर्ष विश्वास गर्न लायक नभएको उनीहरू बताउँछन् । ब्युटाकोलर सिञ्चित क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुन्छ । ब्युटाकोलर प्रयोग नहुने क्षेत्रमा समेत मौरी मरिरहेको छ । ब्युटाकोलर एक झारनाशक रासायनिक विषादी हो । धानखेतीमा झारपात धेरै उम्रिने भएकाले ब्युटाकोलरको प्रयोग गरेर झारपात नष्ट किसानले लुकीछिपी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
बागवानी अनुसन्धान केन्द्रले किसानले लगाएको फुजी स्याउ पनि जुम्लामा खेती गरेर फाइदा पाउन सम्भव छ या छैन भन्ने विषयमा भन्न सकिरहेको छैन । तर किसानले धमाधम फुजी स्याउ रोपेर फल बेचिरहेका छन् । जुम्लामा बागवानी, भेडाबाख्रा, कृषि, उच्च पर्वतीय कृषिलगायत अनुसन्धान केन्द्र छन् । सबै केन्द्रमा अनुसन्धानका काम हुन सकेका छैनन् । सबै अनुसन्धान केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी भए पनि दक्षको अभाव छ । अनुसन्धानमा प्रयोग हुने औजार उपकरण छैनन् ।
बागवानीजन्य बालीहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गुणस्तरीय स्याउका कलमी बेर्ना, तरकारीहरूको बीउ उत्पादन गरेर किसानलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यले २०२४ मा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाको राजीकोटमा स्थापना भएको थियो । स्थापना कालदेखि नै यसले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभावले नयाँ जातको बीउ अनुसन्धान गरेर किसानसँग पुर्‍याउन नसकिएको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटका प्रमुख वैज्ञानिक राजकुमार गिरी बताउँछन ्। बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा तीन जना वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । तर, एक जना मात्रै छन् ।
प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी तीन जनाको छ । एक जना पनि छैनन् । कर्णालीको उच्च पहाडमा हुने बागवानी कृषि वस्तुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको अनुसन्धान केन्द्रमा १९ जनाको दरबन्दी छ । १३ जना कार्यरत छन् ।
यी १३ जना अनुसन्धानको काममा प्रयोग हुन सक्ने जनशक्ति होइनन् । वैज्ञानिक गिरी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका सबै काम ठप्प छन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम बनाएर पेस गर्न सकिएको छैन ।’ अनुसन्धान केन्द्रले जुम्लाको अनुकूलतामा कार्यक्रम बनाएर पेस गरेपछि मात्र सरकारले रकम पठाउने हो । केन्द्रले अहिले जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । अनुसन्धानको काम अघि बढ्न सकेको छैन । वैज्ञानिक गिरीले भने, ‘सरकार अनुसन्धान केन्द्र खोल्छ तर पर्याप्त दक्ष जनशक्ति पठाउन सक्दैन । त्यसैले अनुसन्धानको प्रतिफल किसानले पाउन सक्दैनन् ।’ २०२७ सालमा विजयनगरमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र भयो । जग्गा, जनशक्ति र सिँचाइको अभावले गर्दा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको केन्द्रका एक मात्र प्राविधिक तथा सूचना अधिकारी नारायण मण्डल बताउँछन् । जुम्लाका अनुसन्धान केन्द्रमा आउने कर्मचारी राम्रो ठाउँ जान नदिई दबाब दिएर पठाएको अनुभव गर्छन् । आए पनि लामो अवधि नबस्नु यसको कारण हो । डा. रमेश साह भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठिचौर र उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख हुन् । जिल्लामा ५० भन्दा धेरैको संख्यामा भेडा पाल्ने किसान ३ सय बढी छन् । जिल्लामा भेडाको संख्या ७८ हजार र बाख्रा ५१ हजार छ । दुई अनुसन्धान केन्द्रको जिम्मेवारी उनले एक्लै सम्हालेका छन् । कार्यक्रममा तीन जना वैज्ञानिकको दरबन्दी छ । उनी एक्लै छन् ।
प्राविधिक अधिकृतमा ३ जना दरबन्दी छ, जनशक्ति छैनन् । उता उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा १८ जनाको दरबन्दी छ, कार्यरत संख्या ३ मात्र छ । ‘यहाँ अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रका जस्तो छ,’ डा. साहले भने, ‘दरबन्दीअनुसारको दक्ष जनशक्ति नहुँदा किसानले खोजेजस्तो अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यो समस्या देशभरका अनुसन्धान केन्द्रमा छ ।’ भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम २०२७ मा स्थापना भएको हो । अहिले यहाँ चार जात स्वदेशी बर्नवाल, भ्याङलुङ, उन्नतमा रोम्ली मार्क र कुपोर्थ भेडा छन् । यो केन्द्रले पनि पशुपालकलाई उचित सल्लाह सुझाव दिन सकेको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ११:५१
मगन्ता समुदाय जहिल्यै उपेक्षामा
वैशाख २९, २०७९ जे पाण्डे
नेपालगन्ज — भोला मगन्ता (महाउत) को घरमा बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने संकट छ । चुहिने फुसको छानोको लागि खर किन्ने पैसा छैन । पानी पर्दा घरभित्रै पोखरी बन्छ । ओढ्ने ओछ्याउने त परै जाओस्, लगाउने गतिला कपडा पनि छैनन् । ‘बिरामी हुँदा औषधिमूलो गर्ने उपाय छैन । जेनतेन अस्पताल पुगे पनि कहिल्यै औषधि पाइँदैन,’ बाँके मगन्तपूर्वाका उनले भने ।
सबैले मगन्ता भनेर हेप्छन्, गिज्याउँछन् । मागेर र मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले साँझ–बिहान खान पुग्दैन । स्कुलको फिस तिर्न किताब–कापी र कपडा किन्न नसक्दा धेरैजसो स्कुल जानै पाएका छैनन् । अस्तव्यस्त बस्तीमा हिंड्ने बाटो छैन । जताततै पानी ताल पर्छ । धेरैको त घर पनि जलाम्मे हुन्छ । घरवरपर फोहोरको डुंगुर देखिन्छ । दुधे बालबालिकाको मुखमा माखा भन्केको देखिन्छ । बस्तीका अति विपन्न मगन्ताहरू निकै कष्टकर अवस्थामा छन् । तीन साताअघि आएको हुरीले भगदरामको छाप्रो उडायो । अहिले उनी घरबासविहीन भएका छन् । अर्को छाप्रो बनाउने उपाय नभएपछि भगदराम बस्तीबाट विस्थापित भएका छन् । उनी कामको खोजीमा भौतारिंदै छन । कहाँ बस्छन् र के खान्छन् भन्ने कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । ‘कुनै इँटाभट्टामा काम गर्छन् रे भन्ने सुनेका छौं,’ छिमेकी केलाराम महाउतले भने, ‘हावाले छाप्रो भत्काइदिएपछि यस बस्तीका धेरैको बिचल्ली भएको छ ।’
बस्तीमा अरू गरिब मगन्ताको घर पनि भत्किंदै छन् । कसैले मागेर ल्याएको प्लास्टिकले छानो टालेका छन् । टालो हालेका धेरै छाप्रा छन् । जसमा पानी घरभित्रै पस्छ । बस्तीका कतिपय मगन्ता बिरामी छन् । अस्पताल पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । छाप्राबाहिर गुन्द्रीमा पल्टेर धुरुधुरु रुनुबाहेक विकल्प छैन । ‘भत्केका घरमा बिरामी छन् । रातभरि सुत्न पाउँदैनन् । कमाइ गरेर ल्याए पनि पकाएर खाने ठाउँ छैन,’ रिना महाउतले भनिन्, ‘घरजग्गा छैन । चुनावका बेला आउनेहरूले नल्का दिन्छौं, ग्यास बाँड्छौं भन्छन् । कसैको मनमा गरिबप्रति दयामाया देखिंदैन । केही दिंदैनन् ।’
राज्य संरचनासँगै धेरै व्यवस्था फेरिए । तर, पुस्तौंदेखि गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बाँकेका मगन्ता अर्थात् महाउत समुदायको १ सय १५ घरपरिवारलाई अहिलेसम्मका कुनै पनि परिवर्तनले छोएको छैन । परिवर्तन र विकासका गगनचुम्बी सपना बाँड्दै आएका राजनीतिक पार्टीका नेता हुन् वा नीति निर्माता नै मगन्तपूर्वाका गरिबको दुर्दशा कहिल्यै देखेनन् । सबैले सधैं बनाए त केवल चुनाव जित्ने भर्‍याङ मात्रै । अहिले उक्त बस्तीमा भोट माग्न जानेको ओइरो लाग्ने गरेको छ । तीमध्ये पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला घरबास निर्माण गरिदिने सपना बाँडेर भोट माग्नेहरू पनि छन् । फेरि उनै पुराना झूटा आश्वासन बाँड्दै हात जोडेर भोट माग्ने गरेको दलसिघार महाउतले बताए । ‘कसैले इँटाको घर बनाइदिन्छु भन्छन् । कोही टिनको छानो हाल्दिन्छौं भन्छन् । कोही बाटो र नाली बनाइदिन्छु भन्छन्,’ दलसिघारले भने, ‘अघिल्लो चुनावमा पनि त्यस्तै आश्वासन दिएर भोट मागे । चुनावपछि कसैले फर्केर हेरेनन् । अहिले फेरि झूटा वाचा गर्दै छन् ।’
नेपालगन्ज उपमहानरपालिका–१४ र डुडुवा गाउँपालिका–६ मा पर्ने मगन्तपूर्वाका मगन्ता जातिका धेरै परिवार वर्षौंदेखि गरिबीको चरम चपेटामा पर्दै आएका छन् । राज्य पक्षले वास्ता नगर्दा भिख मागेर जीविकोपार्जन गर्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ ।
बाँके र बर्दिया दुई जिल्लामा मगन्ता समुदायका ३ सय ४९ घर–परिवारका ७ सय ८ महिला र ७ सय ८१ जना पुरुष छन् । चुनावका बेला झूटा सपना बाँड्ने बाहेक लोपोन्मुख अवस्थाको यो जातिको उत्थानका लागि कतैबाट कहिलै कुनै प्रयास भएका छैनन् ।
आफ्नो आवश्यकता परेपछि बस्तीमा पुगेर भोट माग्नेहरू मगन्ता समुदायको आवश्यकतामा कहिल्यै काम लागेनन् । लोपोन्मुख मगन्ता जाति सूचीकृत पनि छैनन् ।
पहिलो पटक उम्मेदवारी
राज्यबाट उपेक्षित मगन्ता समुदायकी जवन्ती महाउत आफ्नो वर्गको हितका लागि संघर्ष गर्ने अठोटका साथ यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी छन् । मगन्ता जातिको इतिहासमै उनी प्रथम महिला उम्मेदवार हुन् । एमालेले वडा सदस्य पदमा उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो । चुनावी दौडमा उत्रिएकी उनीसामु चुनौतीका चट्टान भने ज्यादै ठूला छन् । चुनाव जित्न अन्य उम्मेदवारले पैसाको खोलो बगाइरहेका छन् । विपन्न समुदायकी जवन्तीलाई भने साँझ–बिहानको छाक जुटाउनै मुस्किल छ । उनी भोको पेट शान्त पार्न हिंड्ने कि भोट माग्न गाउँबस्ती पुग्ने भन्ने संकटमा छन् । ‘दिउँसो भोट माग्न हिंडे साँझ भोकै बस्नु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साँझ–बिहानको गाँस जुटाउने कि भोट माग्न हिंड्ने भन्ने समस्या छ ।’